Miahiahy momba ny “polisy misahana ny fitondran-tena” ny Azerbaijaney · Global Voices teny Malagasy
Natao hampitolefika fizahantany ara-pananahanao Baku a io vondrona mampiadihevitra io
Voadika ny 04 Oktobra 2019 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Français, čeština , Italiano, Español, русский, فارسی, srpski, English
Polisy mpanao fisafoana any afovoan'i Baku, renivohitr'i Azerbaijan. Sary: Wikimedia Commons, 2019. CC BY SA 3.0.
Tamin'ny 2 septambra, nampahafantarina ny mponina tao Baku fa karazana mpitandro filaminana vaovao no hanao fisafoana eny an-dalambe ao an-drenivohitra Azerbaijaney. Nanonona ny fanambaràn'ny Departemantan'ny polisy tany Baku ny fampahalalam-baovao avy any an-toerana, fa nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa handray “fepetra fisorohana hentitra” hiadiana amin'ireo olana “mifanohitra amin'ny soatoavina ara-pitondrantenan'ny vahoaka sy ny fisainan'ny firenena.” Voalaza fa noraisina taorian'ny fitarainana maromaro nataon'ireo mponina tany amin'ny sampan'ny polisy ny fanapahan-kevitra.
Ny filoham-pirenena Ilham Aliyev no nitondra an'i Azerbaijan nanomboka ny taona 2003. Malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tombontsoa ara-barotry ny fianakaviana Aliyev; ny fisehosehoana sy ny fiderana ny fomba fiainan'izy ireo amin'ny gazetiboky iraisampirenena sy ny fanadihadiana amin'ny asa fanaovan-gazety. Saingy rehefa ao an-tanidrazana, mitoetra ho fomba fanao miely patrana hanalàna baraka ny Azerbaijaney ho manao fitondrantena tsy mendrika, na inona na inona izany, ny fiantsoana ny “soatoavina sy toe-tsaina nasionaly” mandala ny nentin-drazana .
Ka tsy mahagaga rehefa nanao izany fanambarana izany ny polisy ao an-drenivohitra, ary miteraka fanoherana avy amin'ireo mponina tia fivoarana ao Baku. Inona avy ireo soatoavina ara-pitondrantena izay nitaky fiarovana avy amin'ny polisy? Inona no namaritana ny toe-tsaina nasionaly tamin'ity toe-javatra manokana ity, ary inona no atao hoe fanitsakitsahana ny fitsipi-pitondran-tena sy ny soatoavina?
“Midika ve izany fa ratsy fitondran-tena ny vehivavy manao akanjo fohy na ny mpivady mifampitanana?” hoy ilay mpisolovava Samira Aghayeva nanontany tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Radio Azadliq, tolotra tamin'ny fiteny Azerbaijaney amin'ny Radio Free Europe. Notohizan'i Aghayeva fa tsy niresaka momba ny tena fandikana ny “toe-tsaina nasionaly” ny manampahefana, izay noheveriny fa ny polisy tenany mihitsy no tsy mahafantatra ny fomba hitantanana ny raharaha tahaka izany.
Noho ny tsy fisian'ny sehatra ara-dalàna mazava, dia misy ny tahotra fa mety hanorisory ny olom-pirenena amin'ny raharaha “fitsipi-bahoaka” fotsiny ny polisy amin'ny lafiny rehetra izay heveriny fa mifanaraka amin'izany. Manaraka ny teo aloha izany, izay miasa toy ny mpiambina ny fitondran-tenam-bahoaka, toy ny any Arabia Saodita, Iran, na Malezia ny polisy.
MeydanTV, sehatra media tsy miankina miasa any an-tsesitany, namoaka sariitatra avy amin'i Gunduz Aghayev, izay maneso ny “polisy ara-moraly”. Haingana avy hatrany ireo Azerbaijaney nizara ny fisalasalany tao amin'ny tambajotra media sosialy:
They are creating “morality police”. They will be measuring the length of skirts on Torgovaya [a major pedestrian street in Baku]
Mamorona “polisy ara-pitondran-tena” izy ireo. Handrefy ny halavan'ny zipo amin'ny Torgovaya [lalana lehibe ho an'ny mpandeha an-tongotra ao Baku] izy ireo
Vetivety dia nazava fa momba ny fanaraha-maso atao amin'ny sehatra iray tena manokana ny fampidirana ny “polisy ara-pitondran-tena”: ireo mpivarotena sy fizahan-tany ara-pananahana any Azerbaijan.
Tao anatin'ny fanambarana tamin'ny 14 septambra, toa nihemotra ny Minisitry ny Atitany any Azerbaijani, nanambara fa tsy hihatra any Baku ny “politikan'ny fitondran-tena”. Fa ireo mpanao fisafoana manokana fantatra amin'ny fanamiany no ho tompon'andraikitra amin'ny “fanesorana ireo vehivavy tsy manana soatoavina manome tolotra firaisana ara-nofo ho an'ny mpizahatany” ao afovoan-tanàna.
Tsy manome ny isan'ny olona ampiasaina amin'ity sehatra manokana ity ny biraon'ny antontanisam-panjakana. Araka ny angon-drakitry ny UNAIDS, tombanana ho 32 000 ny isan'ireo mpivaro-tena any Azerbaijan tamin'ny taona 2018, fiakarana maherin'ny 5000 niainga tamin'ny taona 2011. Nandritra izany fotoana izany, nanomboka nanakiana mafy ny fitomboan'ny fivarotan-tena hita ao amin'ny tanànany ny mponina ao Baku.
Saingy ao amin'ny firenena izay malaza amin'ny kolikoly ny polisy ary voaporofo fa tsy nisy fahombiazana ny ezaka taloha hanakanana ny fivarotan-tena sy ireo asa tsy ara-dalàna, toa mampanontany tena ny taham-pahombiazan'ny sampana vaovao manokana (polisy) amin'izany. Ao Azerbaijan fehezin'ny mpanao didy jadona, efa ela ny polisy no nanampy tamin'ny fanatontosana famoretana sy fanarahamaso ireo mpanohitra sy mpikatroka avy amin'ny mpanohitra. Raha misy kosa, dia vao avy nohavaozina fotsiny ny andraikitry ny polisy ao Azerbaijan mba hitsabaka bebe kokoa amin'ny fiainana manokan'ny olona – izany rehetra izany dia mba hamahana ny olana izay tsy vaovao.
Raha ny marina, maro amin'ireo manampahaizana izay niteny momba ny fivelarana vao haingana no miombon-kevitra fa tsy azo antoka hampidina ny asa fivarotan-tena ny fampidirana ny polisy misahana ny fitondran-tena. Nilaza kosa izy ireo fa tokony hahita vahaolana amin’ny tena antony mahatonga ny olona ho any amin'ny sehatry ny fivarotan-tena ny manampahefana, tsy maintsy miatrika ireo antony fototra ry zareo toy ny tsy fahampian'ny fanabeazana tsara, ny tsy fitovian'ny karama ary ny tsy fahampian'ny hirika ara-toe-karena.
Manontany ny rehetra hoe: aiza ny fitondran-tena eo amin'ny polisy misahana izany?
We don't need morality police. We need moral police.
Tsy mila polisy ara-pitondran-tena izahay. Mila polisy tsara fitondran-tena izahay.